ပဲ့တင်သံတခုရဲ့ ရောင်ပြန်: အမြင်လေးတွေပြောပါဦး..
Posted by ရောင်ပြန် at 4:09 PM
တကယ်တော့ နှစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘောင်းဘီ ကျပ်တာပဲ။ ကျနော့် အမြင်တော့ ဒါဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိတာနဲ့ ဗိုက်ကြီးတာ လိုပဲ ထင်တာပဲ။
လူကြီး မိဘနဲ့ကျတော့ ဒါက ကျနော့်ချစ်သူလို့ ပြောမှာပေါ့။
လူငယ်ချင်းကျတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဒါက ငါ့ရည်းစားကွ လို့ပြောမိမယ်ထင်တယ်။
အင်း ကိုထူးမြတ်ပြောတာပဲ ဟုတ်တုတ်တုတ် ..
ကျနော့်ဘ၀မှာ သူကတော့ ချစ်သူ သူကတော့ ရည်းစား ဆိုပြီး တစ်ခါမှ ခွဲပြီး မထားခဲ့ဖူးဘူး ..
တစ်ခါတစ်လေ တန်ဖိုးထားပြီး အလေးအနက်ပြောချင်ရင်
ချစ်သူလို့ သုံးနုန်းတတ်တယ် ..
တစ်ခါတစ်လေ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ပြောချင်ရင်တော့ ရည်းစားလို့ ပြောတတ်ပါတယ် ..
ကျနော့် အမြင်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ ရောင်ပြန်ရေ :P
ကိုမိုးသောက် ပြောတာသဘောကျပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျာ ချစ်သူဆိုတာက ပိုပြီး လေးနက်သလိုပဲ ရည်းစားခါကျတော့ ပြောရတာသိပ်မကောင်းသလိုပဲ ဟဲဟဲ အတွေ့အကြုံဖလှယ်ဆိုတော့ ဖလှယ်ရတာပေါ့ ကောင်မလေးတွေကို ရည်းစားလို့ပြောရင် သိပ်မကြိုက်ချင်းဘူးဗျ အဲ ချစ်သူလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ သဘောကို ခွေ့လို့ ဟား ဟား ယုံဘူးလား ပြောကြည့်လိုက်လေ
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ချို့ကတော့ ချစ်သူဆိုတာ
အမှန်အကန် တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်တဲ့သူကို သတ်မှတ်ကြတယ် .. ကျွန်တော်လည်း သဲသဲကွဲကွဲ မသိပေမဲ့ ငယ်ငယ်တည်းက ရည်းစား ဆိုတာထက် ချစ်သူ ဆိုတာ ပို လေးနက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ် ....
ဘယ်သူမှန်တယ်လို့တော့ မပြောတက်ဘူး ....
ကျွန်တော်ကတော့ ချစ်သူဆိုတာ လေးနက်စွာ သုံးနှုံးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဟုတ်တယ် လေ.. ကိုမိုးသောက်တို့ ပြောသလိုပဲ ချစ်သူနဲ့ ရည်းစားတူတူပဲ မဟုတ်ဘူးလား.. တူတူပါပဲကွာ..
သေချာတော့မသိပေမယ့်၊ ချစ်သူလိုသုံးနှုံးရင် ကြိုက်တယ်။ ရည်းစားဆိုတဲ့စကားလုံးက နည်းနည်းပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်သလိုပဲ။
ရောင်ပြန်ရေ...မီးလေးကတော့ချစ်သူဆိုတာပိုပြီးလေးနက်တယ်လို့ လက်ခံထားတယ် ရည်းစားအပျော်ထားတယ်လို့ပဲကြားဖူးတယ် ချစ်သူအပျော် ထားတယ်လို့မကြားဖူးဘူး မီးလေးကိုယ်တိုင်လဲထားခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေကိုရည်စားလို့ပဲ သတ်မှတ်ထားတယ် ချစ်သူလို့မသတ်မှတ်ဘူး... အဲလေ...ပေါ်ကုန်ပါပြီး..ဟီးးးးးးးး
အင်း... တကယ်တော့ နှစ်ခုလုံးက အတူတူပါပဲ။
နေရာဒေသ၊အချိန်အခါ ကိုလိုက်ပြီး အပြောအဆို ကွဲပြား
သွားတာပါ။ ကိုယ့်ယူတဲ့တဲ့မိန်းမကို တစ်ခါခါမှာ
ဒါကကျွန်တော့ဇနီးလေ၊ ဒါကကျွန်တော့မိန်းမလေ၊ ဒါကကျွန်တော့ အမျိုးသမီးလေ၊စသည်ဖြင့်သူ့နေရာနဲ့
သူလိုက်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးသလိုမျိုးပေါ့၊ အဲ..မိန်းမတွေ
အနေနဲ့ လည်းဒီလိုပဲ... ဒါကကျွနမ ယောက်ျားလေ၊
စသည်ဖြင့်ပေါ့ သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့။။ အဲလိုပဲ တရားဝင်
မယူရသေးခင်သူတွေအနေနဲ့ အခေါ်အဝေါ်ယဉ်ကျေးမှု ကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲသွားတာပါ။
မသိဘူး၊) :) :)
ဒီစကားကိုသုံးတယ်ဗျ ရည်းစားတစ်ထောင် လင်ကောင်
တစ်ယောက်ဆိုတော့ ရည်းစားဆိုတာက မလေးနက်ဘူးလေ ချစ်သူဆိုတာကမှ ပိုလေးနက်တယ် လို့ထင်တယ် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူကို နောက်ဘယ်သူမေးမေး ချစ်သူလို့ပဲပြောတော့မယ်
ကျုပ်က `ချစ်သူ´ ကို `ချစ်ခင်နှစ်သက်ရပါသောသူ´ လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ချင်တယ်။
ပြီးတော့ `ချစ်သူ´ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးတဲ့အခါ အပြင်လူကိုရော ကိုယ့်ရည်းစားကိုရော ရည်ညွှန်းပြီး သုံးလို့ရပေမယ့်... `ရည်းစား´ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ တတိယလူကို ပြောတဲ့အခါမှပဲ သုံးကြတာက ကွာခြားချက်တစ်ခုပါ။
ဥပမာ။ `ရည်းစားရေ... မင်းသိစေချင်တယ်´ ဆိုတာမျိုးကို မသုံးဘူး။ `ဒါကျုပ်ရည်းစားလေ´ ဆိုတာမျိုးပဲ သုံးတတ်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ရည်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် နားလည်မှုမရှိလို့ကတော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး လို့ထင်တယ်။
ကျနော့် အမြင်အရတော့ ချစ်သူနဲ့ ရည်းစား မတူဘူးလို့ ထင်တယ်။ ချစ်သူက ကိုယ်တကယ် မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်ရတဲ့ သူကို ခေါ်တာ။ ရည်းစားဆိုတာတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်သူလို့ သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်နိုင်တဲ့သူ လို့ ထင်ပါတယ်။ ချစ်သူဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဘက်က ချစ်နေရုံနဲ့လည်း သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ပဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရည်းစားကတော့ နှစ်ဘက်လုံးက ချစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော် အဲလိုပဲ မြင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူဆိုတဲ့ စကားလုံးက ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိသလို ခံစားရတယ်။ ရည်းစားကတော့ နည်းနည်း ပေါ့ပါးတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုလို့ မြင်မိတယ်။
တကယ်တော့ မျက်နှာ လို့ ခေါ်လို့ရသလို
မျက်ခွက်လို့လဲ ခေါ်လို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးပေါ့နော
" ခင့်မျက်နှာလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ "
" ခင့်မျက်ခွက်လေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ "
လို့ပြောတာ ဘယ်ဟာက ပိုပြီးနားဝင်ချိုပါသလဲဗျာ..
ဒါပေမဲ့ စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကတော့ ကွာခြားလွန်းလှပါတယ်
တယ်.. ရည်းစားဆိုတဲ့ စကားကတော့ အနည်းငယ်
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော့ အထင် နဲ့ ကျွန်တော့
အမြင်ပါ.. တချို့နဲ့ ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ သားသားက ခလေးပဲရှိသေးတယ် ဟီးဟီး
ဒါတွေ သားသားသိဘူး.. ရှာအုပ်ထဲကနေ ဖတ်ပြောတာပါ အဟဲ
ရည်းစားဆိုတာ casual ပေါ့.....
ချစ်သူ ဆိုတာ ကိုယ်က ချစ်ရတဲ့သူ။ ပိုပြီး လေးနက် တယ် လို့ထင်ပါတယ။်
ရည်းစား ဆိုတာကတော့ သေချာပေါက် ရည်းစား တရားဝင် ရည်းစား
ချစ်သူတို့ရည်းစားတို့ လုပ်မနေပါနဲ့ဗျာ။ တကယ်ညားမှ ငါ့မိန်းမကွ လို့ကြွားရတာ ပိုမိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော..။
ရည်းစား=ရည်းတဲ့စား အဲ ဟုတ်ပါဘူး ရည်းစားဆိုတာ မသိတော့ဘူးရှုပ်နေတာပဲ။ ဟီးးးးးးးးး နောက်တာနော်
အနော်က ခရေးပဲရှိသေးတယ်။ ဒါတွေနားလည်ဘူး (ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ)
ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဆိုရင်တော့ ချစ်သူပေါ့။
ဒီလိုပဲအခြေအနေ နဲ့အချိန်အခါအရတော့ ရေလိုက်ငါးလိုက်ပြော
ကိုဟန်သစ်ငြိမ်ပြောတာ စံနစ်ကျတယ်လို့ မြင်တယ်။
ကိုထူးမြတ်ကြီးလို့ ခေါ်သွားတဲ့ Dream ပြောတာ လက်မခံဘူး။ ကျနော့်ကို ကိုထူးမြတ်ကြီးလို့ ခေါ်လို့... :D (စတာပါ)
အင်း ချစ်သူနဲ့ ရည်စားမှာကတော့ ချစ်သူက ပိုပြီးလေးနက် မလားလို. ယုန်လေးထင်တာနော်. မှန်ချင်လည်းမှန်မယ် မှားချင်လည်း မှားမယ်။ ယုန်လေးတို့ကျောင်းနေတဲ့ အချိန် မှာတော့ ဆရာ ပြောတာက သမီးတို့ရေ ရည်းစားတွေ မထားနဲ့တဲ့ ချစ်သူပဲထားတဲ့. ရည်စားဆိုတာ အပျော်ချစ် တာတဲ့ ချစ်သူဆိုတာ ကိုယ်က တကယ်ချစ် သူလည်း တကယ်ချစ် တာတဲ့..ချစ်သူဆိုတာကို ပိုလေးနက်တယ် ထင်တာပဲ...ဟီဟီ..
အင်းဗျ... အမြင်ချင်းတွေ က တူနေတယ်... ကျွန်တော်ကတော့ ချစ်သူဆိုတာ ကိုကြိုက်တယ်.. ချစ်သူ ဆိုတာ ကိုယ်က ချစ်ရတဲသူ... ချစ်သူ ... သူက ချစ်ရတဲ့သူ ချစ်သူ ပဲ မဟုတ်လားဗျ... ရည်စားဆိုတာ က နဲနဲပေါ့တယ်...
အဟဲ ၀င်ပြီးနှမ်းဖြူးလိုက်ဦးမယ်။ သိပ်မကွာဘူး အတူတူပဲလို့ ထင်တာပဲ။ နေရာဒေသ၊ အခြေအနေကို လိုက်ပြီး သုံးစွဲရတာပ။ ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နားလည်မှု အပြည့်အ၀ ရှိဖို့ ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
Phyo Thet Aung said...
အင်း ချစ်သူနဲ့ ရည်းစား ... ရည်းစားနဲ့ ချစ်သူ
ဘာတွေလည်း သိတော့ဝူးကွာ ..
ကျနော်က တော့ အချစ်လို့ပဲခေါ်ချင်တယ်
အင်းမအားတော့ခုမှလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် နောက်ကျနေပြီ ဆိုတော့ကိုယ့်အယူအဆ တွေလည်းသူများပြောတဲ့ဟာ နဲကတူနေပြီ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အမြင်ဆိုတာကိုမပြောလို့ ကလည်းမဖြစ်ပြန်ဒီတော့ ကျွန်တော်ယူဆတာကတော့ သူများတွေပြောသလိုပေါ့မှန်ချင်မှမှန်မယ် ချစ်သူဆို တာကိုပိုလေးလေးနက်နက်ခံစားမိသဗျ ရည်းစားဆို တာကတော့ အလွယ်ပြောကြတဲ့စကားရပ်လို့ထင်တယ် လိုက်လံစစ်ကြောကြည့် ဒါကျွန်တော်ချစ်သူပါလို့ပြော တဲ့လူရှားမယ်ထင်တယ် သေချာ၏ မသေချာ၏ တော့ မသိ
ချစ်သူဆိုတာ ပိုလေးနက်တယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တာပဲဗျာ...
ဒါပေမယ့် ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ ရှင်းပြရမလဲ မသိဘူး ... ဘာကြောင့်လို့ လာမမေးနဲ့နော် :)
ရည်းစား နဲ့ ချစ်သူ မတူဘူးလို့ အစတည်းကယူဆထားတာပဲလေ။
ချစ်သူ ဆိုတာ ပိုလေးနက်တယ် အခေါ်အဝေါ်ကတော့အဆင်ပြေသလိုပေါ့။ သူများတွေပြောသလိုပဲ ဒါငါ့ရည်းစားလို့ပဲပြောတာများပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဘက်ကတော့ ချစ်သူ ဆိုတဲ့စကားကိုကြားချင်တာအမှန်ပဲ။ တစ်ကယ်ချစ်တဲ့လူဆီကပေါ့လေ။
နောက်ဆုံးမှလာပြီး ဝင်ဖောသွားတယ် :P